IBMW Hybrid esebenzayo, 'ibhayisekile' entsha yenkampani yaseJamani Iindaba zeGajethi
Izithuthuthu azisekho Esona sisombululo sishukumayo sokuhamba kwedolophu. Kubonakala ngathi le ngcamango iqondwa ngokugqibeleleyo yinkampani ye-BMW. Kwaye ukumiliselwa kwayo kutshanje kugxile kakhulu kwisithuthi sendalo kunye nempilo. Imalunga ne- IBMW Hybrid esebenzayo, ibhayisekile incedisiwe. Oko kukuthi, ibhayisekile yombane okanye nge-biki.
IBMW Hybrid esebenzayo yi ibhayisekile enoyilo olujolise ekuhambeni; Akuqapheleki ukuba sisithuthi esidibanisa ibhetri. Njengokuba kunjalo kuko konke ukwazisa kwenkampani yaseJamani, esi sithuthi sendalo senziwe ngezinto ezisemgangathweni. Umzekelo, isakhelo sayo senziwe hydroformed. Ngale nto, siya kuba nakho ukukhupha ubunzima kwiindawo apho kungafuneki khona kwaye ngenxa yoko sifezekise ubunzima obusetiweyo.
Ngakolunye uhlangothi, Ibhetri eyongezwe kwi-BMW Active Hybrid inomthamo we-504 Wh. Injini yombane, ebekwe kwibrakethi esezantsi, inika amandla aphezulu e-250W nge-torque ye-90 Nm. Konke oku kuvumela umsebenzisi ukuba afikelele izantya eziphezulu ezingama-25 km / h "Lumka, kuba inokuba ngaphezulu, kodwa iyinyini kumzi-mveliso." Ngokunjalo, kwaye njengoko kusenzeka kuninzi i-e-bhasi, Umsebenzisi unokukhetha inqanaba loncedo ekutyikityeni. Iya kuba namanqanaba ama-4: ukusuka kwinqanaba le-ECO (50% yoncedo) ukuya kwimowudi ye-TURBO (275% yoncedo). Yintoni egqithisile, Uluhlu olunokufikelelwa ngentlawulo enye lufikelela kwiikhilomitha ezili-100.
nayo, iBMW Hybrid esebenzayo inezibuko le-microUSB kunye nonxibelelwano lweBluetooth ukuze ukwazi ukudibanisa i-smartphone yakho nangaliphi na ixesha. Okokugqibela, le BMW Hybrid esebenzayo ineediski eziqhekezayo; amavili ayo atyikitywa luphawu lwelizwekazi; isali yiSelle Royal kwaye ukukhanya ngasemva kukukhanya kwe-LED. Le bhayisekile yombane inokuba yeyakho ngexabiso le- 3.400 euro kwaye iya kufumaneka nge Ivenkile ye-Intanethi yenkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IBMW Hybrid esebenzayo, 'ibhayisekile' entsha yenkampani yaseJamani
I-TSMC ilungiselela ukuveliswa kweetshipsi ze3nm